Igumbi Lakho Lokulala Kwindlu Enendawo Yokuphola - I-Airbnb
Igumbi Lakho Lokulala Kwindlu Enendawo Yokuphola
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguShayan
Ibekwe kwizikhumbuzo zembali yasePakistan, iCeil ibamba impembelelo yeBritish Raj kwimbali nenkcubeko yasePakistan; ukuzisa konke kunye kumnikelo ophilileyo wobugcisa, ukutya, kunye nendlela yokuphila kubathengi bayo.
Lo msebenzi wokwakha waseBritane wenkulungwane yaphakathi uphefumlelwe yimbali yeMall Road yaseLahore. Iipaseji ezihonjisiweyo, ezihonjiswe ngeetapestries eziqaqambileyo kunye nemizobo, zikhokelela kwintendelezo ebalelelwe lilanga, ilungele ukukhululeka ngencwadi kunye neminikelo yokutya kaCeil.
Isilingi yindlu enamagumbi okulala amahlanu, eneyadi kunye neCigar Lounge. Khetha igumbi okanye ubhukishe ivilla, sikunika zombini.
Inani lamagumbi: 1
I-USD 25 ngosuku
Igumbi elilala abantu ababini
Elinemigangatho Emibini Inani Lamagumbi: 1
I-USD 45 ngosuku
Inani lamagumbi: 5
I-180 yeedola zaseMerika ngosuku
La maxabiso angentla asekelwe ekuhlaleni kube kanye. Ixabiso elisisiseko elicatshuliweyo kwi-AirBnB lisebenza kwigumbi Elinye. Qhagamshelana nathi ngeqela okanye ngokuhlala ixesha elide. Onke amagumbi anegumbi lokuhlambela labucala.
Ukususela kumpheki wethu wasekhaya owenza isidlo sakusasa esifanelekileyo sesiNgesi, ukuya kutsho kwisidlo sangokuhlwa se-alfresco kunye nemililo ye-bonfent kwiCourtyard yaseCeil, sifuna ukungcamla ukutya kwakho okumnandi kwidolophu yethu. Yidibanise nomboniso okanye umcimbi kwiipaseji ezihonjiswe kakuhle. Sonke siyintsapho nabahlobo apha. Umgcini mnyango imini nobusuku kunye nabasebenzi baqinisekisa ukuba uyakhathalelwa ngalo lonke ixesha.
Ukuqinisekisa ukuba ukhuselekile ngamaxesha eCOVID, iCigar Lounge ivaliwe ukuze kuncedwe. Sinethemba lokuba siza kuyibuyisela kuwe kungekudala.
I-Ceil isembindini weLahore. Kumgama wemizuzu emi-5 ukusuka kwindlela yaseMall, iMM Alam Road kunye neCentre Point. Iindawo ezikufuphi zibandakanya ipaki yeRace Course, amaziko onyango aphezulu kunye nentlaninge yeendawo zokutyela ezisuka kumatyathanga okutya okukhawulezayo njengeMc Donalds, kunye ne-KFC ukuya kwindawo yokutyela ecolekileyo kunye nezibiliboco zalapha ekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Shayan